MOFA News – Page2– Ministry of Foreign Affairs
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစ္စရေးသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
H.E. U Myo Thant Pe Presents Credentials to President of the People’s Republic of China
H.E. U Aung Kyaw Moe appointed as Ambassador of Myanmar to the People’s Republic of Bangladesh
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် မြန်မာ-ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံတွေ့ဆုံပွဲနှင့် နှစ်နိုင်ငံ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အာဆီယံ-ကိုရီးယား ဆွေးနွေးဖက်ဆက်ဆံရေး နှစ် (၃၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ပထမအကြိမ် မဲခေါင်-ကိုရီးယား ထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ရောက်သည့်ခရီးစဉ် (တတိယနေ့)
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စင်ကာပူသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က ဘိုလီဗာရီယန်းဗင်နီဇွဲလားသမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကျွန်းစုနိုင်ငံများဆိုင်ရာ ဒုတိယဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဘူဆန်နိုင်ငံခြားဘာသာသင်တက္ကသိုလ်နှင့် ဘူဂယောင်း အမျိုးသားတက္ကသိုလ်တို့မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် တွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အာဆီယံ-ကိုရီးယားဆွေးနွေးဖက်ဆက်ဆံရေး နှစ်(၃၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ပထမအကြိမ် မဲခေါင်-ကိုရီးယား ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်သည့် ခရီးစဉ် (ဒုတိယနေ့)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက “၂၀၁၉ ကိုရီးယား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနေ့” အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနားလည်မှု စာချွန်လွှာရေးထိုးခဲ့ခြင်းနှင့် Panel discussion တွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း
Keynote Speech of Her Excellency Daw Aung San Suu Kyi State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar at the ROK CEO Summit
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အာဆီယံ-ကိုရီးယား ဆွေးနွေးဖက်ဆက်ဆံရေး နှစ်(၃၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ပထမအကြိမ် မဲခေါင်-ကိုရီးယား ထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ရောက်သည့် ခရီးစဉ် (ဒုတိယနေ့)
Keynote Speech of Her Excellency Daw Aung San Suu Kyi State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar at the Culture Innovation Summit